Play ဂေါက်လှည့်လည်ပညာရှင်များဓာတ်ပုံပြခန်း Designs
"ဂေါက် Designs Play" Tour ပညာရှင်များဓာတ်ပုံပြခန်း
Seema Sadekar ကင်မ် Kouwabunpat နှင့် Amber ရမ်
ဂေါက်လှည့်လည်ပညာရှင်များပြခန်း Designs Play ။ Play ကိုဂေါက် Designs ၏ Courtesy; ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြုခဲ့
ဂေါက် Designs Play ဂေါက်သီးဖြစ်ရပ်များဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲတဲ့ Las Vegas မှ-based ကုမ္ပဏီ၏နာမတော်သည်။ အဲဒီမှာအမေရိကန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအများအပြားထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်များမှာ, ဒါ Play ကိုဂေါက် Designs ၏ "ချိတ်" ကဘာလဲ? PGD ​​ဘယ်သူကိုအများအပြားဂေါက်သီးပရိသတ်တွေဖို့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကြောင်း, အမျိုးသမီးများခရီးစဉ်ပညာရှင်များ၏ဝန်ထမ်းများရှိပါတယ်, ပြီးတင်ပါးဆုံရိုးများနှင့်ခေတ်မှီစတိုင်နှင့်သဘောထားကိုနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ဖြစ်ရပ်များ imbues သူတစ်ဦးကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူများက run သည်။
ဂေါက် Designs Play ကော်ပိုရိတ်ဖြစ်ရပ်များ, မေတ္တာဖြစ်ရပ်များ, ပုဂ္ဂလိကကလပ်ဖြစ်ရပ်များစုစည်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲ - သင့်ရွေးချယ်မှု၏ Tour လိုလားသူနှင့်တသားတ-on-one outings ကပင် (- - နှင့်သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ခွင့်ပြုအချိန်ဇယား) စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Play ကိုဂေါက်ဂေါက်သီး၏ဝန်ထမ်းများ Designs (ကနေဒါ, အာရှ, et.al. စေ) LPGA Tour အဖွဲ့ဝင်များ, Futures ခရီးစဉ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်များစွာသောတခြားကမ္ဘာ့ခရီးစဉ်အပေါ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဂေါက်သီးပါဝင်သည်။ သူတို့တွင်အများအပြား "Big လူငယ်များသို့" သွန်းအဖွဲ့ဝင်များလည်းရှိပါတယ်။ သူတို့အားန်ထမ်းများဂေါက်သီးအချို့ရှုမြင်, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည့်ကုမ္ပဏီအင်ဖိုအတွက် playgolfdesigns.com သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဓာတ်ပုံများကိုမှတဆင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဆိုပါပြခန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၌ငါတည်ထောင်သူ Nisha Sadekar (လာမယ့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သူမ၏အကြောင်းကိုပိုမို) မှစီးဆင်းသောကုမ္ပဏီရဲ့ "တင်ပါးဆုံရိုးများနှင့်ခေတ်မှီစတိုင်နှင့်သဘောထားကို" ဖော်ပြခဲ့တဲ့။ ဤဓာတ်ပုံကြောင့်စတိုင်နှင့်သဘောထားကိုဖမ်းယူ။
လက်ဝဲဘက် မှစ. , ဂေါက်သီး Seema Sadekar ကင်မ် Kouwabunpat နှင့် Amber ရမ်ဖြစ်ကြသည်။ Kim ကစတန်းဖို့ဒ်မှာတစ်ဦးနှစ်ဦးအချိန် All-ညီလာခံရွေးချယ်ရေးကြီးနှင့် Amber ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှကစားခဲ့ပါတယ်။ (နောက်ပိုင်းတွင်ပြခန်းအတွက် Seema အပေါ်ပို။ )
ပယင်းရမ်ဟာဂေါက်သီးရိုက် Channel ကိုရဲ့ "Big လူငယ်များသို့ X ကို: မီချီဂန်," အပေါ်တစ်ဦးသွန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်သူမ၏အစ်မ, အက်ရှလေရမ်, သည် "Big လူငယ်များသို့ V ကို" ၏ဆုရှင်အဖြစ်ဂေါက်သီးန်ထမ်းများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမိမိကိုယ်ကို Designs တစ် Play စဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤအဂေါက်သီးအားလုံးသုံးအနာဂတ်မှာခရီးစဉ်အပေါ်အတှေ့အကွုံရှိသည်။ "Kimmy K သည်" အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းခရီးစဉ်အပေါ်ကစားခဲ့သည်။ သူမလည်းအနောက်ကမ်းခြေပေါ် PGD ရဲ့ဆက်ဆံရေးရုံးသည်။
Nisha Sadekar Play ကိုဂေါက် Designs ၏တည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ တိုရွန်တို, Nisha ၏တစ်ဦးကဇာတိမစ်ဆူရီတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ဂေါက်သီးကစားခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်နောက်ပိုင်းတွင်သူမ၏ညီမ (Seema) ကောလိပ်တက်ရောက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်ဘယ်မှာ Las Vegas မှာ, အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည်။
Play ကိုဂေါက် Designs များအတွက် Nisha ၏ရူပါရုံအားကြီးသော Tour ပညာရှင်များ၏တည်ငြိမ်အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောဂေါက်သီး Digest မဂ္ဂဇင်းအဖြစ်မြေားကိုမှအာရုံဆွဲအလျင်အမြန်ချွတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ ကြောင်းမဂ္ဂဇင်း၏ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 ပြဿနာရိုးရှင်းတဲ့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုထည့်သွင်း:
ဂေါက်တည်ထောင်သူ Nisha Sadekar ဖြစ်ပါတယ် Designs Big လူငယ်များသို့ "ပြိုင်ပွဲဝင်သင်ရွေးချယ်လို့အက်ရှလေ Gomes," သင် PGA Tour နှင့်အတူလိုလားသူနံနက်ပတ်ပတ်လည် playa မှ $ 9,000 ပေးဆောင်အကြားသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု Charley ဟော့ဖ်မန်း Pro သို့မဟုတ် Futures ခရီးစဉ်လိုလားသူများနှင့်အတူကစားရန် $ 1500 ရှိခဲ့ပါလျှင် "? Play အဆုံးစွန်သောအပေါ်ဘဏ်လုပ်ငန်း။ "
Nisha အဆိုပါကုမ္ပဏီများအတွက်သေံ၎င်း၏ဂေါက်သီးနှင့် client နှင့် outings သူတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်ထားသည်။ Nisha ရဲ့သဘောထားကပိုပြီးအဘို့ - ကြှနျုပျတို့သညျ "Nishatude က" မခေါ်ပါလိမ့်မယ် - သူမ၏ဘလော့ဂ်, ဂေါက်သီး Couture ထွက်စစ်ဆေးပါ။
Kim ကခန်းမဖွင့်ထားတဲ့ LPGA Tour အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမဟုတျပါဘူး, သူမကိုလည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ Wilhelmina7, အကျော်ကြားတဲ့ Wilhelmina အေဂျင်စီကိုယ်စားပြုနေသော LPGA ဂေါက်သီး၏အုပ်စုတစု။
ထိုအကင်အဖြစ်ကောင်းစွာ, ဂေါက်သီး Designs Play ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ သူမလည်းသူမ (စတန်းဖို့ဒ်မှာကြယ်ကောလိပ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောက်ပါ) 2006 ကတည်းကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ရဲ့ရှိရာ LPGA ပေါ်တွင် '' representin ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2008 ရာသီယနေ့အထိသူမ၏အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Sadekars Play ကိုဂေါက်သီးရိုက်ဒီဇိုင်းများနှင့်အတူပါဝင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအစ်မတွေမဟုတ်; အဆိုပါရမ်အခြားအစ်မလုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ပြီးသားဒီပြခန်းတွင်တွေ့မြင်င့်သူကိုပယင်းရမ်သည်, ညီမ၏, အက်ရှလေရမ်အဟောင်းညီမဖြစ်တယ်, နှင့်ရမ်မိန်းကလေးပထမဦးဆုံးအမှတဆင့်ဂေါက်သီးပရိသတ်တွေမှမိတ်ဆက် "The Big လူငယ်များသို့။ " အက်ရှလေ၏ဆုရှင်ခဲ့ "နဲ့ Big လူငယ်များသို့ V ကို။ ဟာဝိုင်ယီ" သူမသည် Futures ခရီးစဉ်အပေါ်မျိုးစုံအောင်ပွဲ post မှပေါ် သွား. LPGA status ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ အက်ရှလေကိုလည်းဂေါက်သီးခရီးစဉ်န်ထမ်း Designs, Play ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် Nisha Sadekar ကိုကူညီခဲ့သည်။
Seema Sadekar Play ကိုဂေါက် Designs တည်ထောင်သူ Nisha Sadekar ၏ညီမသည်။ Seema နီဗားဒါး-Las Vegas မှာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ဂေါက်သီးကစားနှင့် Futures ခရီးစဉ်အပေါ်ကစားခဲ့သည်။ 2008 ခုနှစ်တွင်သူမကနေဒါအမျိုးသမီးခရီးစဉ်အပေါ်ဦးဆောင်ပိုက်ဆံရရှိသွားခဲ့သည်။
tina Miller က
tina Miller ကအများအပြား Play စနှင့်အတူဘုံတစ်ခုခုဂေါက်သီးခရီးစဉ်အပြစ်တွေ Designs နှင့်ထဲမှာပါဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်ရှိပါတယ် "ဟု Big လူငယ်များသို့။ " ထိုမိန်းမအကြိမ်ကြိမ်အခြားသူများနှင့်ဘုံထဲမှာတခြားအရာတစ်ခုခုရှိပြီး, တစ်မော်ဒယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏သူမ၏လိုက်စားဖြစ်ပါတယ်။ မိုင်ယာမီမှာကောလိပ်အားလုံး-အမေရိကန်နှင့် Futures ခရီးစဉ်အပေါ်အတှေ့အကွုံရှိသူ Miller က, အပေါ်တစ်ဦးသွန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် "Big လူငယ်များသို့ Kaanapali ။ " (ထို "Big လူငယ်များသို့" စီးရီးထဲကနေ Tina ၏ဓါတ်ပုံများကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ဤနေရာတွင် ။ )
နီကိုးလ် Hage, Nisha Sadekar နဲ့ Anna Rawson
Nisha Sadekar တစ် Play ကိုဂေါက် Designs event မှာယူဤပုံဤ၌ (လက်ဝဲ) နီကိုးလ် Hage နှင့် (ညာဘက်) အန္န Rawson အားဖြင့် flanked ဖြစ်ပါတယ်။ Hage Auburn University ကအားလုံး-အမေရိကန်ကောလိပ်ဂေါက်သီးကြီးနှင့်အနာဂတ်ကိုခရီးစဉ်နှင့် LPGA ခရီးစဉ်အပေါ်ကစားခဲ့သည်။ Rawson အဆိုပါ LPGA Tour အပေါ်ထို့နောက် Ladies ဥရောပခရီးစဉ်အပေါ်သူမ၏ဂေါက်သီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုက်ရှာနေချိန်တွင် Vogue မဂ္ဂဇင်းနှင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်းပြပွဲများတွင်ထင်ရှားခဲ့သူတစ်ဦးအခြိနျပိုငျးမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒဏ်ရာ Aree သီချင်းရဲ့ LPGA Tour အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏တိုးတက်မှုနှေးကွေးပေမယ့် Aree ပြုသကဲ့သို့အနည်းငယ်ဂေါက်သီးထိုကဲ့သို့သောလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာဤမျှလောက်ပြည့်စုံပါပြီ။ အသက်အရွယ် 13 မှာ Aree အမေရိကန်မိန်းကလေးများအငယ်တန်းအပျော်တမ်းချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရခဲ့, ထို့နောက် LPGA ရဲ့ Kraft Nabisco ချန်ပီယံရှစ်မှာထိပ်တန်း 10 ဦးတွင်ကိုလက်စသတ်။ နှင့် LPGA ဖြစ်ရပ်များအတွက်ကောင်းနေသေး - - 2003 ခုနှစ်မှာပဉ္စမအရပ်ကို finish ကိုအတွက်အထှတျအထိသူမသည်အဓိကအငယ်တန်းခေါင်းစဉ်အနိုင်ရဆက်လက် အမေရိကန်အမျိုးသမီးအပျော်တမ်း ။ သူမကအချိန်တွင်နေဆဲသာ 17 နှစ်အရွယ်မှာပေမယ့်သာသောစွမ်းဆောင်ရည်ပြီးနောက် Aree, လိုလားသူလှည့်ခဲ့ပေ။ အဆိုပါ LPGA Tour အပေါ်သူမ၏လူသစ်နှစ်အတွက် 2004 ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ယနေ့အထိသူမ၏အကောင်းဆုံး finish ကို 2004 ခုနှစ် Kraft Nabisco မှာတစ်စက္ကန့်-နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Courtney Erdman ဂေါက်သီးဟာဂေါက်သီးရိုက် Channel ကိုစီးရီးအပေါ်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခဲ့သူခရီးစဉ်ပညာရှင်များ Designs, Play နောက်ထပ်ဖြစ်ပါတယ် "ဟု Big လူငယ်များသို့။ " ပြပွဲအပေါ် Courtney ရဲ့ရာသီ "Big လူငယ်များသို့ Kaanapali ။ " ခဲ့ (ထိုစီးရီးထဲကနေ Erdman ၏ဓါတ်ပုံများကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ဤနေရာတွင် ။ ) Courtney ရဲ့လူသစ်ရာသီတခုပရော်ဖက်ရှင်နယ် 2006 သို့သော်ကြိုတင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သကဲ့သို့, သူမက 2005 ခုနှစ်ရွှေပြည်နယ်ယောက်ျားရဲ့ခရီးစဉ်၏တစ်ဦးအပျော်တမ်းအဖြစ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
တိုနီဘလဲ O'Neal နှင့် Marie-Jose Rouleau
တိုနီဘလဲ O'Neal (လက်ဝဲ) နှင့် Marie-Jose Rouleau သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များမှအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုယူကြပြီ။ MJ The Lady ဥရောပခရီးစဉ်သည် Futures ခရီးစဉ်နှင့်ကနေဒါအမျိုးသမီးခရီးစဉ်အပေါ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ, ဂေါက်သီးအာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး, သူလည်းဂိမ်းဆရာဖြစ်ပါတယ်။ တိုနီဘလဲ, အနာဂတ်အတွက်ခရီးစဉ်အပေါ်အတှေ့အကွုံရှိခြင်းစဉ်ဂေါက်သီးနှင့်မော်ဒယ်နှင့်သရုပ်ဆောင်အလုပ်အကိုင်များကိုလိုက်စားအကြားသူမ၏အာရုံခွဲထွက်ခဲ့သည်။
အယ်လီနာ Kurokawa နှင့် Hwanhee Lee က
အခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခရီးစဉ်အပေါ်အတှေ့အကွုံရှိခြင်းနေချိန်မှာအယ်လီနာ Kurokawa (လက်ဝဲ) နှင့် Hwanhee Lee ကနှစ်ဦးစလုံး, Futures ခရီးစဉ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခံစားကြပါပြီ။ အယ်လီနာလိုလားသူအဖြစ် UNLV နှင့်သူမ၏လူသစ်ရာသီမှာကောလိပ်ဂေါက်သီးကစား 2007 Hwanhee ကိုလည်းလိုလားသူအဖြစ် UNLV နှင့်သူမ၏လူသစ်နှစ်အတွက်မှာကစားခဲ့ပါတယ် 2006 အယ်လီနာဆိုးလ်အတွက်တိုကျိုနှင့် Hwanhee မွေးဖွားခဲ့သည်ခဲ့သည်။
Shayna Miyajima ဟာဝိုင်ယီကျွန်းတစ်ဇာတိဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သူမရဲ့ဆံပင်အတွက်ပန်းပွင့်နှင့်အတူတစ် surfboard အပေါ်လောကအတွက်ရဲ့သင့်လျော်တဲ့ပါပဲ။ သူမသည် San Diego မှပြည်နယ်တက္ကသိုလ်တွင်ကောလိပ်ဂေါက်သီးကစားဖြစ်လျှင်, 1998 ဟာဝိုင်ယီအထက်တန်းကျောင်းချန်ပီယံအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ Shayna 2005 ခုနှစ်လိုလားသူလှည့်နှင့်အနာဂတ်ခရီးစဉ်အပေါ်ကစားခဲ့သည်။
က Tiger Woods '' အမြင့်နှင့်အလေးချိန်ဘာတွေလဲ?
Holly Stacy အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Slammin '' ဆမ်: PGA Tour ရဲ့ Winningest ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား၏ဇီဝ, ဆမ် Snead
Ernie Els: 'The Big လြယ္ကူ' '၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်ဇီဝ
ချာလီ Gibson - "Big လူငယ်များသို့ VI ကို" ပြိုင်ပွဲချာလီ Gibson
Lexi Thompson ကဇီဝနှင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးကိုယ်ရေးဖိုင်
မှ Ian Poulter ဖက်ရှင် Show ကို
က Tiger Woods မဆိုမောင်နှမဖူးပါသလား?
အဆိုပါ Tunguska Event
ရောမဆပ်ကပ် Maximus ကဘာလဲခဲ့သလား
ပြည်နယ်ယူနစ်လေ့လာမှု - နယူးဂျာစီပြည်နယ်
Ball ကို PlayThree ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
အဆိုပါအသက်ခြောက်ဆယ်၏ bra မီးရှို့ခံရသောအမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသူများ၏သွန်သင်ချက်အမှား
စန္ဒယားအဘို့ဗိုလ်မှူး Triad Chord
Hayden Panettiere discussion 'ရေခဲပြင်မင်းသမီး' '
အဆိုပါဝုဒ်အတွက် Golfing: Parkland သင်တန်းများ
Floam Make လုပ်နည်း
Bobby Lashley ဓာတ်ပုံပြခန်း
PHP ကိုအတူတစ်ဒေတာဘေ့စ မှစ. တစ် Link ကို Create
နိုးလော့ & ဖတ်နေပါဖို့ကိုဘယ်လို
ရှိထား Lovett အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အက်ဆစ် & အခြေစိုက်သိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းအကြံပြုချက်များ